Kedu ihe bụ nkume: njirimara, nhazi na mineral | Netwọk Mgbasa Ozi
Na ụwa anyị, e nwere nkume dị iche iche. Kemgbe e guzobere ụwa anyị, a kpụrụla ọtụtụ nde n'ime afọ ndị dabere na njirimara, mbido na mmalite e nwere ụdị dị iche iche. Ka anyị kọwaa gini bu nkume n'usoro echiche ala banyere ala ka ị wee ghọta nke ọma ihe ụwa anyị bụ.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe nkume bụ, ihe njirimara ya bụ na kedu ụdị dị iche iche dị.
1 Kedu ihe bụ okwute
2 Rockdị nkume
2.1 Sedimentary nkume
2.2 Nkume Plutonic
2.3 Nkume nzuzu
2.4 Metamorphic nkume
Nkume dị na mineral ma ọ bụ nchịkọta nke mineral ọ bụla. N'ime ụdị nke mbụ, anyị nwere granite, na mineral, anyị nwere nnu nnu dị ka ihe atụ. Nkume Rock bụ usoro dị nwayọ nwayọ ma soro usoro dị iche. Dabere na Jenesis nke nkume, enwere ike kee ya ụzọ atọ: akwa mmiri, nkume sedimentary, na nkume metamorphic. Nkume ndị a anaghị adịgide adịgide, mana ha na-agbanwe ma na-agbanwe mgbe niile. N'ezie, ha bụ mgbanwe na geologic oge. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, na ọnụọgụ mmadụ, anyị agaghị ahụ nhazi na mbibi nke oke nkume, mana ha nwere ihe a na-akpọ okirikiri.
A na-akpọ nkume ndị ahụ na-etolite site na nchịkọta nke ihe dị iche iche nke nha dịgasị iche, nke sitere na mkpụrụ ndị ọzọ nwere mkpụkpụ okwute. A na-akpọ ihe niile mejupụtara nkume ahụ sed sedimeti. Nke a bụ mbido aha ya. A na-ebugharị ihe ndị a site na mmiri nke ụwa dị ka mmiri, ice na ifufe. A na-ebugharị ihe ndị na-eme ka nkume na-edozi ahụ site na ihe dị iche iche dị iche iche na-arụ ọrụ ma na-edebe ha na mmiri ndị a na-akpọ.
N'ime usoro ịkwaga sedimenti, ihe okwute ahụ ga-enweta usoro anụ ahụ na kemịkal dị iche iche akpọrọ diagenesis. Site na aha a, anyị na-ezo aka n'usoro usoro okwute. Kacha nkịtị ọnọdụ bụ guzobe nke sedimentary nkume dị n'akụkụ osimiri, akwa mmiri, ọdọ mmiri, estuaries, iyi ma ọ bụ ndagwurugwu. E guzobere sedimentary nkume na-ewere ọnọdụ n'ime ọtụtụ ijeri afọ. Ya mere, iji nyochaa mmalite na nhazi nkume sedimentary, a ghaghi iburu n'uche oge onodu ala.
Ọzọ anyị ga-akọwa njirimara ndị bụ isi nke ụdị okwute a kpụrụ na sedimenti ndị ahụ e kwuru na mbụ. Ha na-adịkarị okirikiri ma ha enweghị oghere. Ihe odide ya siri ike ma nwee ihe dị iche iche. Ha dị iche iche n'ihi na anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ kemịkal sitere na ụdị magma nke ha si bịa.
Nkume ndị a bara ụba nke ukwuu n’elu ụwa ma were ya dị ka oke ala. Nke a bụ n'ihi na nkume ndị a masịrị nguzobe nke nkume ndị ọzọ. A na-ahụkwa ụdị okwute ndị a na mbara ala ndị dị na mbara ala, dịka Mercury, Venus, na Mars, na mbara ala gas ndị ọzọ, dịka Saturn, Jupiter, Uranus na Neptune.
Nkume ndị na-amaghị ama bụ nkume nke magma jụrụ n'ime ụwa. O nwere akụkụ mmiri nke uwe mgbokwasị ahụ a na-akpọ asthenosphere. Enwere ike ime ka magma mee ka o sie ike n'ime ala ma site na ike sitere na eriri ụwa. Dabere na ebe magma dị mma, kristal ahụ ga-etolite na ọsọ ọsọ dị iche iche n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ, na-ebute textures dị iche iche, dị ka:
Nnukwu: Mgbe magma jiri nwayọ jụụ ma mineral na-eti mkpu, ihe a na-ahụ anya nke yiri oke ga-apụta.
Uhie: a na-emepụta magma mgbe ọ jụrụ oyi n'oge dị iche iche. Na mbu ọ malitere ịjụ oyi nwayọ nwayọ, mana ọ na-agba ọsọ ọsịsọ.
Vitreous. Ọ na-akpọ porous udidi. Ọ na - eme mgbe magma jụrụ ngwa ngwa. N'ụzọ dị otu a, emebela iko ahụ, mana ọ dị ka iko.
Ha bụ nkume ndị e guzobere site na nkume ndị ọzọ. Ha na-ejikarị nkume ndị na-edozi ahụ nke gbanwere usoro mgbanwe anụ ahụ na kemịkal. Ọ bụ ihe ndị dị na mbara igwe dịka nrụgide na ọnọdụ okpomọkụ na-agbanwe nkume. Ya mere, ụdị nkume na-adabere na mineral ndị dị na ya na ogo mgbanwe ya n'ihi ihe ndị dị na mbara igwe.
Anyị enweghị ike ịkwụsị ịkọwapụta ihe nkume bụ na-enweghị ekwu maka mineral. Ihe omimi bu ihe siri ike, ihe okike, na ihe ndi ozo sitere na magma. Enwere ike ịmalite ha site na mgbanwe na mineral ndị ọzọ dị ma mepụta. Ngwongwo obula nwere uzo ogwu doro anya, nke dabere na ya. Usoro nhazi ya nwekwara njirimara anụ ahụ pụrụ iche.
Mkpụrụ enyela iwu atom. A maara atọm ndị a ka ha bụrụ sel nke na - emeghachi onwe ya n'oge niile. Ihe owuwu ndị a na-emepụta ụfọdụ ọdịdị geometric nke, ọ bụ ezie na ọ bụghị mgbe niile ka anya na-ahụ ya, ọ dị adị.
Mkpụrụ ndụ ahụ na-etolite kristal ndị na-agbakọta ọnụ ma na-eme usoro ma ọ bụ na-arụ ọrụ. Kristal a na-akpụ kristal na-aga n'ihu nwayọ nwayọ. Jiri nwayọ nwayọ nke kristal, ihe a na-enye iwu ka ihe niile dị na ya, ya mere, ọ ka mma usoro mkpuchi.
Achọghị kristal ịnweta, ma na-achịkọta nchịkọta. Ọ bụrụ na kristal abụọ ma ọ bụ karịa na-etolite n'otu ụgbọelu ma ọ bụ axis nke symmetry, a na-atụle ihe owuwu a na-akpọ kristal ejima. Otu ihe atụ nke ejima bụ crystalline rock quartz. Ọ bụrụ na mineral na-ekpuchi elu nkume ahụ, ha ga-etolite ma ọ bụ dendrites. Dịka ọmụmaatụ, pyrolusite.
N'ụzọ dị iche, ọ bụrụ na mineral na-eti mkpu n'ime oghere nkume, a na-emepụta ihe owuwu a na-akpọ geodesic. A na-ere ahịa geodesics a n'akụkụ ụwa niile maka ịma mma na ịchọ mma ha. Olivine bu ihe nlere anya nke uzo. Enwekwara ụfọdụ nnukwu geodesics, dị ka Pulpi mine na Almería.
E nwere ụkpụrụ dị iche iche maka ịkọwa mineral. Ka anyị malite na nke mbụ. Dika ihe mejuputara mineral, enwere ike ichikota ya n'uzo di mfe. Ha kewara:
Metal: Ngwurugwu igwe nke magma guzobere. Ndị a ma ama bụ ọla kọpa na ọlaọcha, limonite, magnetite, pyrite, malachite, azurite ma ọ bụ cinnabar.
Na-abụghị nke ọla. N'etiti ndị na-abụghị ọla, anyị nwere silicates, nke ihe bụ isi bụ silicon dioxide. Ihe mejupụtara ha bụ magma asthenosphere. Ha bụ mineral dịka olivine, ihe ọmụmụ, talc, muscovite, quartz, raw sugar na ụrọ. Anyị nwekwara nnu nnu, nke a na-esi na nnu na-amịpụta mgbe mmiri oke osimiri na-amịpụ. Enwekwara ike ịmalite ha site na ịmaliteghachi ihe ndị ọzọ. Ha bụ mineral guzobere ọdịda. Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere calcite, gypsum, magnesite, anhydrite, wdg.
Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmatakwu ihe nkume bụ na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Kedu ihe bụ okwute